ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏မှုန်ဝါးနေသောလိုင်းများ Martech Zone
မနေ့ကဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကမ္ဘာ့ဖလားမှာငါလုပ်ခဲ့တာ ကြီးထွားလာသောနောက်လိုက်များထံမှလူမှုမီဒီယာဖြင့်ရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်း။ ငါဟာမကြာခဏဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တွန်းအားပေးသောအကွံဉာဏျဆန့်ကျင်တာပါ ... အငြင်းပွားဖွယ်ရာအပေါ်တစ်နည်းနည်းမှီခို။ စစ်မှန်သောရူပဗေဒမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် ဆက်လက်၍ တိုးတက်မှုကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်သည် - သို့သော်၎င်းတို့သည်ရှိပြီးသားဖြစ်သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပရိသတ်သို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာမေးခွန်းများစွာမေးရန်အထိသွားခဲ့တယ် ROI တိုင်းတာခြင်း သင်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာကြိုးပမ်းမှုများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြန်ပေါ်လာလျှင်ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ပါ အဲရစ်တီတန်... ချက်ချင်း Tweet လုပ်ခဲ့သူ:
မသွားနဲ့ @Nichole_Kellyလူမှုရေးမီဒီယာ ROI သည် BS ဖြစ်သည်။ @douglaskarr # SMMW14
- Eric T. Tung (@EricTTung) မတ်လ 27, 2014
ကျွန်တော့်ရဲ့လေးစားဖွယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (နှင့်ကာရာအိုကေ) ကတည်းကအထူးသဖြင့်ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ နီကိုးလ်ကယ်လီတစ်ပြိုင်နက်တည်းသူမ၏ session ကိုမျှဝေခဲ့သည် အမှတ်တံဆိပ် Social Media ROI ကိုတိုင်းတာသည့်ကုလားကာကိုဆွဲထုတ်သည်။ Doh!
ငါရှိသည်တစ်ခုမယုံကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ - လူမှုရေးအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။ တကယ်တော့၊ ဒါကလက်ရှိယုံကြည်မှုအများဆုံးကုမ္ပဏီတွေထက်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အဆိုပါပြproblemနာကိုတိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာကြိုးပမ်းမှုများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်ရောက်စေသည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
တိုက်ရိုက် Attribution - လူများကသတင်းကိုမြင်ပြီး ၀ ယ်ယူကြသည်။
သွယ်ဝိုက်တွက်ချက်မှု - လူတွေကမက်ဆေ့ခ်ျကိုမျှဝေတာဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကိုသင့်ကိုလူမှုရေးအရလွှဲပြောင်းပေးပြီးသူတို့ဝယ်ယူလိုက်တယ်။
အမှတ်တံဆိပ် Attribution - လူများမြင်ကြသည် သငျသညျ အွန်လိုင်းနှင့်သင့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသုတေသနပြုရန်သင့်ကို ဦး ဆောင်နေသောသင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်အခွင့်အာဏာတစ်ခုအဖြစ်သင့်ကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရသော - လူများသည်သင့်အားအွန်လိုင်းမှနောက်သို့လိုက်ကြသည်၊ သင်သည်သူတို့၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုရရှိပြီးသင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သူတို့ကို ဦး ဆောင်သည်။
တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုသည်တိုင်းတာရန်လွယ်ကူသည်။ အချို့သောကောင်းမွန်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခြေရာခံခြင်းနှင့်သင်ယင်းကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ ပြနာ လူမှုမီဒီယာ ROI ကိုတိုင်းတာခြင်း တခြားသူတွေနဲ့ပါလာတယ် သူတို့သည်သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခြေရာခံခြင်းကိုအမြဲအသုံးမပြုပါ - သို့မဟုတ်သူတို့သည်အခြားအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်သင်၏ site သို့ ၀ ယ်ယူသည်။
ဂူဂဲလ် Analytics တွင် Multi-Channel conversion Visualizer ဟုခေါ်သည့်စိတ်ကူးယဉ်ကိရိယာတစ်ခုရှိပြီးသင့် visitors ည့်သည်များသည်သင်၏ site သို့ရောက်ရန်နည်းလမ်းများစွာအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေမကြည့်နိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါဤအမှန်တကယ်ဖန်သားပြင်တွင်လိုင်းများသည်မှုန်ဝါးလာသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤဆိုဒ်ရှိပြောင်းလဲမှုအများစုသည်ဆိုဒ်ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ကြည့်ရှုသူများထံမှလာခြင်းဖြစ်သည်။
သင်၌၎င်းတို့တွင်အီးမေးလ်အရောင်းအ ၀ ယ်ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်မရှိဟုသင်ကောက်ချက်ချနိုင်သော်လည်းအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုနှင့်လွှဲပြောင်းမှုလမ်းကြောင်းအပေါ် ROI အတိအကျကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်ပေ၊ အရာ channel ကိုသူတို့ကိုဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါကမတင်သွင်းလိမ့်မယ် အရာအဲဒါအားလုံးရဲ့ဟန်ချက်ညီမှုပဲ။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများသည်သူတို့၏နည်းဗျူဟာတစ်ခုစီသည်အခြားတစ်ခုအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအားထုတ်မှုကိုသင်လျှော့ချလိုက်လျှင်၎င်းသည်သင်၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကမင်းရဲ့ထုတ်ကုန်နဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေဟာဘာလဲဆိုတာကိုမသိချင်ဘူး။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာယုံကြည်မှုမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ဟာလူမှုရေးကောင်းတဲ့ပြိုင်ဘက်ပြိုင်ဖက်တွေကိုရှာဖွေပြီးသူတို့နဲ့အတူပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လူတိုင်းကမင်းရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေအကြောင်းပြောနေတာ do သင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းထပ်ဆောင်းဆောင်းပါးများဆီသို့ ဦး တည်သည့်ထူးချွန်သောလူမှုရေးတည်ရှိမှုကိုရရှိသည်။
စျေးကွက်သမားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာခန့်မှန်းချက်လိုအပ်နေတယ် analytics ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုအားလုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည့်ကိရိယာများ - ၎င်းတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မည်သို့ကျွေးမွေးသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလည်းကောင်းနားလည်စေရန်ကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးအရမျှဝေခြင်းနှင့်၎င်းအားထုတ်မှုကိုတိုက်ရိုက်တွက်ချက်ခြင်းဖြင့်တိုင်းတာလိုပါက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာကြိုးပမ်းမှုများကိုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုအားလုံးတွင်မဟာဗျူဟာ၏သက်ရောက်မှုများကိုကြည့်ရှုခြင်းတို့၏ကိစ္စဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သည်မည်သည့်အလတ်စားကိုအသုံးပြုရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မဟုတ်တော့ပါ။ တစ်ခုချင်းစီတွင်မည်မျှကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အရင်းအမြစ်များကိုဟန်ချက်ညီစေရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ dashboard ကိုအသံဘုတ်တစ်ခုအဖြစ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ တေးသီချင်းများလှပသည်အထိခလုတ်များကိုဖွင့ ်၍ ချပါ။ လူမှုမီဒီယာအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်တစ် ဦး ပြန်လာ နိုင် တိုင်းတာရမည် - သို့သော်လက်တွေ့တွင်မူထို A တွင်းရှိ A ကြံပြုချက်အချို့ထက် ပို၍ မှုန်ဝါးသည်။
မှတ်စု: သင်လုပ်နိုင်သည် Social Media Marketing World သို့ virtual pass ကိုဝယ်ယူပါ တက်ရောက်ရန်ကုန်ကျစရိတ်၏အနည်းငယ်နှင့်သင်သည်ငါ၏ session နှင့်အခြားတင်ဆက်မှုအားလုံးနားထောင်နိုင်သည်!
Tags: အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး roiရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပြန်လာအီးမေးလ် roiစျေးကွက်ရှာဖွေရေး roiမြဝတီပေးဆောင်ရှာဖွေရွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေး roiလူမှုမီဒီယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာလူမှုမီဒီယာ roi
မတ်လ 28, 2014 မှာ 3: 30 pm တွင်
ဩော်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိုယ်ထည်ဘာသာစကားကို ခြေရာခံပြီး ရုပ်သံလိုင်းပေါင်းစုံစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၊ ဦးဆောင်ရမှတ်များ စသည်တို့ကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည့် ကောင်းမွန်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေး အလိုအလျောက်စနစ်အတွက် ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံတော်။ အိုးခဏ။ 😉 #Eloqua ။